Inkabadan 60 Ajaanib Al Shabaab katirsanaa oo La qaraxday walxo ay farsameenayeen – XAMAR POST
Inkabadan 60 Ajaanib Al Shabaab katirsanaa oo La qaraxday walxo ay farsameenayeen
By Mohamed Abdi On Jun 8, 2021
Abaare 3:30 shalay galab ayaa waxa tuulada Aala-fuutoow ee dhinaca galbeed qiyaastii 65-kiilo-mitir kaxigta degmada Qoryooleey ee gobolka Shabeelaha hoose waxaa uu qarax kadhacay xaruntii Al-shabaab ay kufarsameyn jireen qaraxyada.
Goobtaasi inuu qarax kadhaco waxaa sababay kadib markii waxyaabihii ay farsameynayeen ay kuqarxeen xarunta ahayd guri ka koobnaa 11-qol kaasi oo lagu diyaarinayey gaari iyo miinooyinka dhulka lagu aaso iyo sidookale jaakadaha ay u isticmaalaan isqarxinta.
Xaruntaasi qaraxyada lagu farsameynayey waxaa kusugnaa horjoogayaal ajaaniib iyo Soomaali ah iskugu jiray kuwaasi oo waxyeelo badan kasoo gaartay dadkii gurigaasi kusugnaa.
Warbaahinta Dawlada Soomaaliya uqaabilsan dhinaca Ciidamada ayaa sheegtay in 61- Askar iyo horjoogayaal katirsan Al Shabaab ay goobtaasi kugeeriyoodeen kuwaasi oo ay kamid ahaayeen lix Amiir oo Ajaaniib ah sidoo kale waxaa goobta kugeeriyooday hooyo iyo canugeeda oo goobta ka agdhawaa sida ay sheegeen Saraakiil katirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Warar hordhac ah oo kasoo baxaya qaraxaasi kadhacay xaruntii qaraxyada gobolka Shabeelaha hoose Al-shabaab kulahaayeen tuulada Aala-fuutoow oo hoostaga Qoryooleey ayaa sheegaya in horjoogayaasha qarxaasi kugeeriyooday uu kamid yahay nin lagu magacaabo Axmed Shariif (Abuu Bilaal) oo kasoo jeeda dalka Afgaanistaan oo Al-shabaab uqaabilsanaa farsamooyinka gaadiidka qaraxyada & nin kale oo magaciisa lagu soo koobay khaalid kaasi oo dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka Yemen.
DHAGEYSO: Rooble Oo Amray in ciidamada Mushaarkooda La Kordhiyo
DHAGEYSO: Taliye Xijaar oo Hal Arin faray Ciidamada Booliska kusugan Muqdisho